Namuhla sibheka ndaba, ngaphandle okuyinto smartphone yakho kuyoba nje ucezu ezibizayo plastic ne ikhono elikhulu abayovumelana kuphela "nje shayela."
Noma iyiphi idivayisi (computer, tablet, netbook noma smartphone) uzokunika injabulo nokutamasa kuphela uma izophelelisa inombolo ethile izinhlelo. Ngosizo kulezi zinhlelo, sizokwazi ukuba uye ku-inthanethi ukuze uthumele noma ukuthola i-imeyili, ubuke ama-movie, umsebenzi kumadokhumenti, ulalele umculo, incwadi noma bazijabulise edlala yimuphi umdlalo.
Kuye ohlelweni lwakwa zokusebenza ufuna ukufaka, abe uhlobo oluthile (isandiso). For Android OS - le apk isandiso. ifayela Ngokwazo apk - ingobo yomlando, okuyinto igcwele uhlelo smartphone Android. Iyonke izinhlelo ungafaka kudivayisi yakho izoba xxx.apk ifomu, lapho "xxx" - yigama hlelo.
Indlela ukufaka ifayela apk ku igajethi yakho? Eqinisweni, kukhona izinketho eziningana for ukufaka izinhlelo. Sizobheka zonke izinketho, futhi ungakhetha eyodwa ukuthi engase ikhange.
Inketho 1: Indlela ukufaka apk kusukela "Market"
Cishe wonke amadivayisi asebenzisa uhlelo lokusebenza Android, ekuqaleni ithengiswe nge uhlelo pre-setha ubuncane ngumkhiqizi, phakathi lapho kukhona uhlelo "Market" noma (e enguqulweni entsha ye-OS) «-Google Play Market." Lolu uhlelo lokusebenza yesitolo ehlukile, lapho kukhona kokubili izinhlelo zokusebenza free futhi wakhokha i-Android. Ukufaka lolu hlelo ngosizo lolu hlelo udinga ukufinyelela Inthanethi (Wi-Fi noma i-inthanethi zeselula), ukwazi igama hlelo futhi babe isikhala khulula efonini noma kumemori khadi yakho ukuze ugcine futhi ufake izicelo akhethiwe.
Ungesabi "izincwadi eziningi" ukuchaza le nqubo. Ngo umkhuba, kubukeka lula kakhulu futhi ngokushesha:
Senza isiqiniseko sokuthi kukhona i-Internet.
"Market" Qalisa uhlelo.
Ngena ku Cinga igama uhlelo ufuna ukufaka;
Bese uchofoza "Faka".
Thina uyavumelana imigomo yokusetshenziswa futhi babheke phambili ukulanda futhi ifake (kuzokwenzeka ngokuzenzakalela).
Zonke. Uhlelo ifakiwe. Thina ugijima, ukusetshenziswa futhi ujabulele.
Inketho 2: Indlela ukufaka apk ngaphandle kokusebenzisa "Market", usebenzisa «AppInstaller»
Akunjalo ngempela zonke izicelo ukulanda kusukela "Market". Akukhona njalo elula. Ungasetha ngokwakho uhlelo olubizwa ngokuthi «AppInstaller» (uyilandele kusukela "Market"), futhi ngeke ukufaka isicelo udinga evela kunoma yimuphi umthombo: isayithi ku-intanethi, SD-ikhadi, USB flash drive, ikhompyutha, njll Indlela okusebenza:
Qiniseka ukuthi ozifakile uhlelo lokusebenza «AppInstaller».
Amasethingi efoni abonisa ukuthi uvumele ukufakwa zokusebenza kusuka emithonjeni engaziwa.
Londoloza ifayela .apk ukumenyezelwa imemori idivayisi noma kwimemori khadi.
Qala «AppInstaller» - uhlelo aqalaze yonke iyatholakala ukufaka isicelo. Ukhetha lokho okudingayo futhi ngazo "Faka".
Zonke. Isiqedile. Thina ugijima bese usebenzisa.
Inketho 3 kanjani ukufaka apk usebenzisa Imenenja yefayela
Siyaqhubeka uhambo lwethu. Lolu khetho kuyafaneleka uma udinga ukuphendula umbuzo "indlela ukufaka apk" ngaphandle kosizo "Market?". Kulesi simo isetshenziselwa setha kwimenenja yefayela - uhlelo okuyinto esethiwe noma ngumkhiqizi idivayisi noma olufakwe kusukela "Gcina". Isibonelo uhlelo ezifana: ES Ifayela Explorer noma eFile, noma yimuphi omunye lwakho olukhethile.
Inqubo ukhumbuza kukho, esebenzisa «AppInstaller». Umahluko owokuthi ukuthi isifaki aqalaze yangaphakathi inkumbulo nememori khadi yedivayisi, futhi uthola zonke izinhlelo atholakalayo ukufakwa. Endabeni imenenja yefayela phambi apk isiqalo, kufanele kuqala ezitholakala uhlu amafolda kanye amafayela efakwe kudivayisi yakho. ke Kuyancomeka ukuba wakhe ifolda ekhethekile, ngokwakhona, uzoba ugcine zonke izicelo zakho.
Idrayivu Yobhalomfihlo i-: yini nokuthi ukuze uyivule?
Indlela ukulanda amavidiyo kusuka kusayithi, uma isici enjalo akusekelwe?
Umhlathi ongezansi ... Indlela nezimpawu kanye nezindlela zokwelapha dislocated wakhe?
Abrahama Maslow. "Motivation and Personality": isifinyezo, ukubuyekezwa
Isakhiwo sendawo ukuzibusa nesimo sezulu